Xiddiga Khadka Dhexe Ee Tottenham Ee Christian Eriksen Oo Sharaxay Qaabkii Uu Goolhayaha Arsenal Ee Petr Cech Uga Caawiyay Goolkii Uu Ka Dhaliyay Juventys – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Xiddiga Khadka Dhexe Ee Tottenham Ee Christian Eriksen Oo Sharaxay Qaabkii Uu Goolhayaha Arsenal Ee Petr Cech Uga Caawiyay Goolkii Uu Ka Dhaliyay Juventys
Xiddiga Khadka Dhexe Ee Tottenham Ee Christian Eriksen Oo Sharaxay Qaabkii Uu Goolhayaha Arsenal Ee Petr Cech Uga Caawiyay Goolkii Uu Ka Dhaliyay Juventys
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ee Christian Eriksen ayaa shaaca ka qaaday sida uu goolhayaha kooxda Arsenal ee Petr Cech uga caawiyay goolkii laadka xorta ahaa ee cajiibka ahaa ee uu xalay ka dhaliyay kooxda Juventus kulan ka tirsanaa lugta 1-aad ee tartanka champions league.
Xiddiga khadka dhexe ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed uu ku mutaystay xiddigii ugu fiicnaa kulankii ay Tottenham samaysay soo laabashada cajiibka ah.
Kooxda Juventus ayaa muddo 9 daqiiqo ah laba gool ku dhalisay iyada oo uu labada goolka u dhaliayay Gonzalo Higuain oo noqday xiddiga 3-aad ee laba gool ku dhaliyay 10 daqiiqo gudohood.
Laakiin Tottenham ayaa ciyaarta ku soo laabatay iyaga oo uu Eriksen u dhaliyay gool qurux badan oo uu kulanka uga dhigay bar-baro 2/2 ah.
Isaga oo ka hadlay goolka kulankii kadib ayuu xiddiga reer Denmark sheegay qabkii uu goolhaye Cech uga caaiyay goolkii uu ka dhaliyay Gianluigi Buffon.
“Waxa aan Sabtidii helay mid la mid ah midii xalay, waan laagay laakiin Cech ayaa si fiican ii akhriyay iyo waliba meesha aan dhigayo, nasiib wanaag midan waxa ay u dhacday si kale”ayuu Eriksen sharaxay”.
“Laakiin waan dareemay, waxana aan arkay derbigii ay Juventus dhigeen oo dhqaaqay, waxa aan sidoo kale arkay Buffon oo talaabo qaaday, nasiib wanaag waxa aan badalay maankayga waxana aan u laagay dhankii uu ka dhaqaaqay”ayuu yiri.